CAFE Enwetela Akụrụngwa Ahụike Ọhụrụ Site Na Mba USA - Igbo News | News in Igbo Language
Apr 30, 2021 - 15:39
Òtù ọrụ obi ebere ahụ a maara dịka 'Caring Family Enhancement Initiative (CAFE) nọrọ na nsonso a wee nweta nnukwu akụrụngwa pụrụ iche a na-ebugharị ebugharị, bụ nke e ji elekọta ma na-agwọ ndị nwere eze mgbu na ọrịa eze ndị ọzọ.
Kpọchakpọcha akụrụngwa ọhụrụ ahụ bụ nke a rụrụ n'ụdị ụgbọala, ma bụrụkwa nke e bunyere òtù ọrụ obi ebere ahụ n'efu site n'aka 'Wesleyan Church Of Denver', dị na mpaghara 'North Carolina' nke mba USA, site na njikọaka onye ahụ chịchara n'ọkwa na nsonso a dịka 'Mayor of London Borough of Brent', ma bụrụkwa Nwaadọ steeti Anambra, bụ Maazị Ernest Ezeajughi.
N'okwu ya oge ọ na-enyefe akụrụngwa ahụike ahụ na ìgòdó ya n'aka Kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti Anambra, bụ Dọkịta Vincent Okpala, n'aha òtù ọrụ CAFE; Maazị Ezeajụghị kọwara onyinye ahụ dịka nke kwesiri ekwesi 'n ilekwasị anya n'ezi ọrụ dị iche iche CAFE na-arụ, nakwa etu o si etute olileanya ndị enweghị olileanya site n'ọrụ obiebere dị iche iche ọ na-abàgide, ma n'ime steeti ahụ ma na mpụga ya.
Dịka ọ na-akọwa onyinye ahụ dịka nkwàdo ha nye CAFE, iji sị ya jisie ike n'ọrụ; Maazị Ezeajụghị gosipụtara olileanya o nwere na nke ahụ ga-enye aka n'ụzọ pụrụ iche n'ime ka ọrụ ndị òtù ahụ na-agawanye n'ihu ma kawanye mfe.
Na nzaghachi ya n'aha onye chọpụtara ma bụrụkwa onyeisi CAFE, bụ nwunye aka na-achị steeti Anambra, bụ Dọịka Ebelechukwu Obianọ, Kọmishọna Ọkapala kèlère ndị ahụ maka ọmarịcha onyinye ahụ.
Ọ kọwara ya bụ onyinye dịka nke bịara n'oge ọ kachara dị mkpa, ma kpọpụtasịakwa ụfọdụ ụzọ dị iche iche nke ahụ ga-esi kwalite ọrụ CAFE na atụmatụ ya; ma kwezie nkwà na ha ga-etinye ya n'ọrụ nke ọma dịka o siri kwesi.
N'Anambra: Ndị Omekoome Awakpòla Ụlọ Igwe Ifitedunu